Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Culinary » I-2021 yee-10 eziPhezulu zeHlabathi zeHootspots zityhilwe
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Culinary • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Shopping • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ukutya esikonwabelayo ngeholide sesinye sezizathu zokuba sithande ukuhamba.
Ziphi iindawo ezifanelekileyo zabathandi bokutya?
Ziphi ezona ndawo zibalaseleyo zeMicrosoft, ukutya kwesitalato kunye neendawo zevegan?
Iingcali zihlalutye izixeko ezikhulu kwihlabathi liphela zizinto ezininzi kubandakanya iMicrosoft yokutyela eneenkwenkwezi, iintlobo zokutya ezikhoyo, iindawo zokutya ezitalatweni, kunye neepesenti yeendawo zokutyela zemifuno.
Ukusuka ekutyeni kwasesitalatweni kwiimarike zangaphandle ezixineneyo ukuya kwindawo yokutya esecaleni kwindawo yokutyela eneenkwenkwezi eMichelin, ukutya esikonwabelayo ngeholide sesinye sezizathu zokuba sithande ukuhamba.
Kodwa ziphi iindawo ezifanelekileyo kubathandi bokutya? Kwaye ziphi ezona ndawo zibalaseleyo zeMicrosoft, ukutya kwesitalato kunye neendawo zevegan?
Iingcali zeshishini lokuhamba zihlalutye izixeko ezikhulu kwihlabathi liphela ngezinto ezininzi kubandakanya iMicrosoft yokutyela eneenkwenkwezi, iintlobo zokutya ezikhoyo, iindawo zokutya ezitalatweni, kunye neepesenti yeendawo zokutyela zemifuno / zemifuno ukutyhila iindawo ezifanelekileyo zokutya.
Ezona zixeko ziBalaseleyo eMhlabeni kwiFoodies:
Kwindawo ephezulu njengeyona dolophu intle yokutya EBern, ISwitzerland efumene amanqaku angama-6.34. UBern ufumene amanqaku aphezulu kwindawo yokutyela eMichelin efumaneka esixekweni kubahlali abangama-100,000 kwaye unenani eliphezulu lokutya esitratweni ngokobukhulu besixeko.
Ngaphandle kobukhulu bayo obuncinci, Isixeko saseLuxembourg Yeyona ndawo ibalaseleyo yokutya kwindawo yesibini apho, efumene amanqaku angama-6.30. Isixeko esilikomkhulu lelizwe elifanayo yindawo ebhedayo yokutyela okucokisekileyo kunye nokutya kwasekhaya, ke qiniseka ukuba uyakuqwalasela ikhefu lakho elilandelayo lesixeko saseYurophu.
EBroges, Ukubetha ukuthandwa kweFlorence neVenice kwindawo yesithathu, yindawo entle yokundwendwela i-foodie enamazinyo amnandi. Iwaffles kunye neetshokholethi iBelgium edume ngazo zombini zinokufumaneka ngesixa esikhulu kwisixeko sonke.